Ithawula, iBhafu itawuli, iBath Robe - iMingda
Ihotele enamanzi amdaka eprintiweyo ...
Ihowuliseyili ethengisa ngokugqibeleleyo 100% Cotton Fouta Beach itawuli Product Ihowuliseyili Best Ukuthengisa 100% Cotton Fouta Pestemal Hamman Beach itawuli Iimpawu 1) .Fashoni Jacquard Series. I-2) .Yonwabile kwaye ithambile kwaye imvakalelo kunye nomgangatho ozinzileyo. 3) Zonke izinto ziveliswa ngokusekwe kwi-AZO yasimahla kunye neeNzuzo eziPhantsi zeCadium 1) Uyilo olwenziwe ngokwezifiso kunye nobungakanani ziyasebenza. 2) impendulo ngokukhawuleza kunye nenkonzo elungileyo. 3) Ukuphicothwa kunye nokuhlolwa ngumntu wesithathu kwamkelekile. 4) .Iinyanga nganye, kufuneka ngaphezulu kwe-50 yoyilo. 5) Khetha ...
Amagqabantshintshi ngeenkcukacha ezikhawulezayo Indawo yeMvelaphi yaseTshayina Igama leWuzhou yenombolo yemodeli yetawuli yokuhlamba itawuli Umboniso IINKCUKACHA ZOKUGQIBELA ZOKUGQIBELA ZOKUGQIBELA ZOKUGQIBELA ZOKUGQIBELA ZOKUGQIBELA ZOKUGQIBELA: 32S Cotton bath bathing sets terry plain , Ipinki yokusetyenziswa kweKhaya Ihotele Spa Motel Inn Irizothi Ilogo Hlamba ileyibhile Iluncedo Eco-friendly Isoft Eco-friendly Ixesha lesampulu iintsuku ezi-1-3 ukufunxwa kwamanzi ngaphakathi kwemizuzwana emi-5 yoMgangatho FIKELELA i-OEM ...
Amagqabantshintshi ngeenkcukacha ezikhawulezayo Indawo yeMvelaphi eGuangdong, eChina BrandName Chars Model Number HT-07 Shape Triangle Material Microfiber Fabric Style Plain Type Hair Towel ， Hair Wrap Towel Age Group Adult Item Microfibre Hair Towel Ilaphu Microfiber Izinwele itawuli Turban Umbala Pink / Purple / Brown / Mthubi Ubunzima be-245gsm yesampulu yexesha i-5-7 yeentsuku zokuhanjiswa kweentsuku ezi-7 ukuya kwezi-14 ze-MOQ ezingama-200pcs Zilungele abaTyhini, Ixesha elide / elifutshane leNwele yePhatheni eDayiweyo yokuSebenzisa iZipho, ...
Fast Ukomisa Super ukufunxa Lightweight Icwecwe ...
Ushwankathelo lweenkcukacha ezikhawulezayo Izinto: i-polyester / i-polyamide Pattern: I-Plain Dyed Style: Uhlobo lwe-Plain: I-Technics yeTawuli yeThawula: Iqela leMinyaka eliQhelekileyo: Imilo ngokubanzi: Isikwere se-Square: UKUQHAQHA-UKUQHAQA, iMicrofibre Sports Travel Beach Ithawula Igama leBrand: I-OEM ODM Indawo yeMvelaphi: Hebei , Inombolo yeModeli yaseTshayina: Iitawuli ezincinci zeMicrofibre Into: Eyodwa i-Microfibre Bath Towels Ubunzima: 200-500gsm Umbala: Intlawulo yeSampula eChongiweyo: Ixesha leSampula yasimahla: Iintsuku ezi-3-5 zoMbala wokukhawuleza: 4 -...
isitokhwe ethengisa zitshiphu uk ibala eqaqambileyo ...
Ushwankathelo lweenkcukacha ezikhawulezayo Indawo yokuQala: Hebei, China Igama leBrand: Inombolo yemodeli ye-ODM ye-OEM: Itheyibhile yokuhlamba ityhubhu: UKUQHAQHA-UKUQHAQHA, ubuchwephesha obomileyo / bokuthuthuzela: Imilo eyelukiweyo: Umbala wesikwere: luhlaza okwesibhakabhaka okanye owenziwe ngokwebanga : Ngaphakathi kwi-3s Sample: I-logo ye-Fress: I-Embroidery, isiQinisekiso sesiko: I-ISO9001 OEKO-TEX Gsm: 200-400gsm Into: microfiber itawuli yokucoca imoto Ubungakanani: 70 * 140cm okanye izinto zesiko: Microfiber Fabr ...
Ihowuliseyili Elungiselelweyo Mandala iintambo Microfibr ...
Isishwankathelo Iinkcukacha ezikhawulezayo Indawo yemvelaphi: Hebei, China Igama leBrand: Ming Da Model Number: MDR-115 Material: polyester / polyamide Feature: QUICK-DRY, large mandala towel Technics: Woven Shape: Round Item: Large mandala beach towel Weight: 200 -500gsm Umbala: Umbala oCwangcisiweyo weSampuli yeNtlawulo: Ixesha leSampuli yasimahla: Iintsuku ezi-3 ukuya kwezi-5 zokukhawuleza kombala: Ukufakwa kwamanzi kwinqanaba le-3-4: Ngaphakathi kwesiQinisekiso se-5: Umgangatho we-OEKO TEX, uyilo lwe-SGS: ...
Zilolonge umbala omhlophe 70 * 140cm ubukhulu kunye nelulwane elikhulu ...
Ushwankathelo lweenkcukacha ezikhawulezayo Indawo yemvelaphi: Hebei, China Igama leBrand: Inombolo yeModeli ye-ODM: Inqaku leBhafu: QHUBA-QHITHA, I-Technics ekhawulezileyo eyomileyo / yokuthuthuzela: Imilo eyelukiweyo: Umbala wesikwere: Umbala oCwangcisiweyo wombala: 3.0 - 4.0 Ukufakwa kwamanzi: Ngaphakathi kwi-3s Sample: Simahla Simahla yeLogo: Embroidery, ileyibheli yesiko leBrand: Ukuqinisekiswa kwesiko: ISO9001 OEKO-TEX Gsm: 200-400gsm Item: Microfiber Towel Material: Microfiber Fabric Pattern: Plain Dye ...
Sinentsebenzo enzulu yeshishini kunye nokwenziwa kwizixeko ezikhulu zase China, ke sinobhetyebhetye kwaye siqinisekile ukwenza naluphi na uhlobo lweemveliso zelaphu kwisithuba sexesha ekuvunyelwene ngaso kunye nomgangatho ngokupheleleyo ngokokuchazwa kweodolo nganye
Inkampani igxile ekuveliseni izixhobo zokusebenza eziphezulu, amandla ezobuchwephesha, amandla ophuhliso olomeleleyo, iinkonzo ezilungileyo zobugcisa.
Ngenxa yamava amakhulu kakhulu wetawuli sinokukhetha okuninzi kweefektri kunye namaziko okusebenza nathi e China .. Kwaye oku kusinika umda kunabanye ukuba abathengi bethu bahlala befumana eyona mveliso isemgangathweni ngexabiso elifanelekileyo.
IINKCUKACHA / iisampulu
Siya kukuvuyela ukufumana uhlobo oluthile lwemibuzo ye-odolo eneenkcukacha zokubonelela ngexabiso elifanelekileyo kunye neesampulu zokubala ngokubuyisela umnqweno wakho wobubele.
Qonda iindlela zangoku zeshishini
Ithawula lokuhlamba elomileyo ngokukhawuleza okanye itawuli yokuhlamba yomqhaphu ebhetele
Yeyiphi engcono, yokumisa ngokukhawuleza itawuli yokuhlamba okanye itawuli yokucoceka yomqhaphu? Ukucoca ngokukhawuleza itawuli yokuhlamba yimveliso yetawuli eyenziwe ngeentsinga ezibalaseleyo, ezinokomiswa ngokukhawuleza kwaye zinokufakwa kakuhle kwamanzi kunye neepropathi zokuhambisa amanzi. Iitawuli zokuhlamba zihlala zisetyenziswa kwiihotele nakwizindlu zeendwendwe. Umgaqo o ...
Ukusetyenziswa gwenxa kunokubangela umhlaza, iitawuli ezincinci ziyacelwa nakwiiyunivesithi
Kwenzeka ntoni kwitawuli emva kokuyisebenzisa ixesha elide? 1. Ubutyheli kunye nevumba a. Xa sisula isikhumba esibilayo kunye neoli ngetawuli kwaye singayicoci rhoqo, itawuli iye iqokelele ukutyeba nokungcola. Emva kwexesha elide, ihlala iziva incangathi. Xa isomile, iya kujika ibe tyheli okanye ivelise into ekhethekileyo ...
Ungayikhetha njani itawuli yokuhlambela kunye nebhafu
Emva kokuhlamba ebusika, sebenzisa itawuli ethambileyo yokuthambisa ukomisa amanzi ebusweni bomzimba, emva koko ubeke ibhafu yokuhlambela efanelekileyo, enokuthintela ukubanda kunye nokuzizisela amava okuhlamba afanelekileyo. Kodwa xa ukhetha nokucoca la maqabane ahlambayo, kukho ...